Soul landနိုဗယ် အပိုင်း 182 3D ကာတွန်းအပိုင်း 149 - kokochitchit.xyz
March 10, 2021 ko ko knowledge 0
Soul Land နိုဗယ် အခန်း ၁၈၂ အကျဉ်းချုပ်
“မဖြစ်နိုင်ဘူး ” ဟူဝူ ထန်စန်းကို ကြည့်ပြီး သူမမျက်စိကိုတောင် သူမ မယုံချင်ဘူး။ သူမထင်ထားတာက ဒီ ၅ နှစ်အတွင်း ထန်စန်းကို ကျော်နိုင်မယ်ဆိုပြီးသူမအားစိုက်လေ့ကျင့်ခဲ့တာ။ အခုထန်စန်းကို တွေ့လိုက်တော့ သူမရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားတယ်။ အဲနောက် ထန်စန်းက “ကျေးဇူးပြု၍” ဆိုပြီး ဒုတိယ တစ်ကြိမ်ထပ်ပြောလိုက်တယ်။ ဖန်ရှောင်ထင်ရဲ့ ဝံပုလွေလက်သည်းနဲ့ တောင်းပံဓါးတို့ကထန်စန်းဆီ ဦးတည်လာတယ်။ထန်စန်းရဲ့အရှေ့မှာ ငွေပြာမြက်နဲ့ ခုခံလိုက်တယ်။ ဟူဝူရဲ့ ခေါင်ပေါ်ကနေ မီးတောက်လုံးထွက်လာတယ်။ဟူဝူရွှန်က သူ့လက်သီးနဲ့ ထန်စန်းကို ထိုးဖို့ ဝင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ထန်စန်း သူ့လက်သီးနဲ့ ပြန်ထိုးလိုက်ကာ ပေါက်ကွဲသွားပြီး ဟူဝူရွှန်အနောက်သို့ဆုတ်သွားတယ်။ ထို့နောက် ထန်စန်းရဲ့ အဆင့် ၄ ငွေပြာမြက် လှောင်အိမ်အကျဉ်းထောင်နဲ့ ဖန်ရှောင်ထင်ကို အကျဉ်းချလိုက်တယ်။ ဖန်ရှောင်ထင်က သူ့ရဲ့ဝံပုလွေလက်သည်းနဲ့ ကုတ်ဖြတ်လိုက်ပေးမယ့် ငွေပြာမြက်က ခြစ်ရာ နည်းနည်းပဲ ဖြစ်သွားတယ်။ထန်စန်း ဖန်ရှောင်ထင်ကို မကြည့်တော့ပဲ ဟူဝူရွှန်ဆီ ဦးတည်လာကာ ငွေပြာမြက်နဲ့ သူ့ခါးကို ပတ်လိုက်တယ်။ဟူဝူရွှန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အဆင့် ၃ နဲ့ အဆင့်၄. ဝိဥာဉ်းကွင်းထွက်လာတယ်။ ဟူဝူရွှန်ရဲ့ အဆင့် ၃ ဝိဥာဉ်းကွင်းက ဒိုင်မူပိုင်ရဲ့ကျားပုံစံနဲ့ အဆင်တူပြီးတော့ အဲတာဟာ သူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးစွမ်းအားကို ရောက်စေတယ်။
ထို့နောက် ဖန်ရှောင်ထင်ရဲ့အဆင့် ၄ ဝိဥာဉ်းအစွမ်း ဝံပုလွေဝိဥာဉ်းနဲ့ တောင်ပံဓါး ၅ ချက်ခုတ်လိုက်ကာ ထန်စန်းရဲ့ အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်သွားတယ်။ ထန်စန်းလဲ သူ့လက်တီးနဲ့ ဟူဝူ၊ဟူဝူရှန်တို့ကို ရင်ဆိုင်နေတယ်။ဖန်ရှောင်ထင်လည်း ဝံပုလွေ လေပွေးတောင်ပံ အသုံးပြုရန် ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ ထန်စန်းက ပင့်ကူအိမ်နဲ့ ပစ်လွှတ်လိုက်တယ်။ထန်စန်းရဲ့ ပင့်ကူအိမ်က အလွန်ခိုင်ခံ့သောကြောင့် ဖန်ရှောင်ထင်အော်လိုက်ပြီး အဆင့်၅ ဝိဥာဉ်းအစွမ်း လေဆင်နှာမောင်းဓါးနဲ့ ပင့်ကူအိမ်ကို ဖြတ်လိုက်တယ်။ ဟူဝူရွှန် စိတ်မရှည်သောကြောင့် နဂါးပုံစံ မီးတောက်နဲ့ ထန်စန်းဆီ ပစ်လိုက်တယ်။ ထန်စန်း သေမင်းနတ်ဘုရားအစွမ်းသုံးပြီး မီးတောက်က အေးခဲသွားတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲ ထန်စန်းရဲ့ ငွေပြာမြက်လှံတံထွက်လာပြီး ဖန်ရှောင်ထင်ဆီ ပစ်တင်လိုက်တယ်။ဖန်ဆောင်ထင်က အဆင့်၅ ဝိဥာဉ်းအစွမ်းနဲ့ လေဆင်နှာမောင်းဓါးသွားသုံးကာ ထန်စန်းရဲ့ငွေပြာမြက်လှံကို လွင့်ပြယ်စေခဲ့တယ်။အဲ နောက်ထန်စန်း teleport နေရာရွေ့အစွမ်းသုံးပြီး ဟူဝူနဲ့ ဟူဝူရှန်တို့ကြာမှ ပေါလာတယ်။ဟူဝူ ချက်ချင်း မီးတောက်ကွင်းသုံးပြီး ထန်စန်းကို ပစ်လိုက်ပေမယ့် ထန်စန်း ပြန်ပျောက်သွားတယ်။
ထိုနောက် ထန်စန်း ဟူဝူနောက် ပြန်ပေါလာပြီး ငွေပြာမြက်နဲ့ သူမခန္ဓာကိုယ်ကို ရစ်ပတ်လိုက်တယ်။ ဟူဝူရွှန် ထန်စန်းဆီ ဝင်လာချိန်မှာ ထန်စန်းက ငွေပြာမြက်ကျဉ်းထောင်နဲ့ ချုပ်လိုက်ပြီး ကောင်းကင်တူးနဲ့ ရိုက်ချလိုက်တယ်။ ဟူဝူရွှန်ကဝိဥာဉ်းနန်ဆောင်ကလူ မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ထန်စန်း သနားကြင်နာသောအားဖြင့် တူးရဲ့အလေချိန်ကို လျှော့ပြီး ရိုက်လိုက်တယ်။အဲနောက် ထန်စန်းရဲ့မျက်လုံးကနေ ခရမ်းရောင် အလင်းတန်းထွက်လာပြီး လေပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ ဖန်ရှောင်ထင်ကို ပစ်လိုက်တယ်။ ဖန်ရှောင်ထင် ခုခံဖို့ မမှီတဲ့ အတွက်ကြောင့် အလင်းတန်းက သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပြီး ပြုတ်ကျလာတယ်။အဲနောက် ထန်စန်းက ” ခင်ဗျာတို့ဆက်တိုက်ချင်သေးလား? ဒါမှမဟုတ် ငါရဲ့ တူးရိုက်ချက်ကို ခံချင်သေးလား? ထိုအချိန်မှာပဲ ဖက်တီးက ” ရှီလာခေ့ သက်ကျော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ၊ ရှီလာခေ့နိုင်ပြီး”ဟု အော်လိုက်တယ်။ထန်စန်း ဟူဝူရွှန်ကို လက်ဆွဲမတင်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ သွေး ပြန်ကောင်းလာရန် ထန်စနိးရဲ့လျှို့ဝက်ကောင်းကင်ဘုံ ပညာရပ်နဲ့ ကုသလိုက်တယ်။အဲနောက် ဖန်ရှောင်ထင်က ” ထန်စန်း ငါမင်းကို ဒီတစ်သက်လိုက်လို့မှီတော့မှာ မဟုတ်ဘူး”။ ဟူဝူက “ထန်စန်း ရှောင်ဝူးရဲ့ပုံစံက ဘာဖြစ်ထားလို့လဲ?
ထန်စန်း ဘာမှ မဖြေလိုက်ဘူး။
ထို့နောက် ထန်စန်းက ” အကိုဖန် ကျွန်တော်တို့ တစ်ခြားနေရာသွားပြီး စကာသွားပြောရအောင်”။ ဖန်ရှောင်ထင်က “ဟူဝူ နင် ဟူဝူရွှန်နဲ့ အဖွဲ့သားတွေ ခေါ်ပြီး ပြန်နှင့်လိုက်တော့ ငါ ထန်စန်းနဲ့ စကားသွားပြောလိုက်အုံးမယ်”။ဟူဝူ ခေါင်ခါပြပြီး ” နိုး ကျွန်မလဲ နားထောင်ချင်တယ်”. ထန်စန်းက အဲဆိုလဲ အတူတူလာခဲ့ကြ။အခန်းတစ်ခုသို့ ရောက်သော် ဖန်ရှောင်ထင်က ” ကျွန်တော်တို့ဒီကို လာတာ ရန်လာရှာတာမဟုတ်ပါဘူး ဒီရှီလာခေ့ကျောင်းနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး နေရာသေးသေးလေးတစ်ခု ရချင်တာ။အဲနောက်ထန်စန်းက တကယ်လို့ အကိုဖန်စိတ်ထဲကအတိုင်း အမှန်မပြောပြရင် ကျွန်တော်ကူညီပေးလို့မရဘူး။ဖန်ရှောင်ထင်က ကောင်းပြီး ငါအမှန်တိုင်းပဲ ပြောတော့မယ် အခု ငါတို့ရဲ့ ဒြပ်ဆင် ၄ ဂိုဏ်းက သိပ်ပြီး အခြေအနေ မကောင်းတော့ဘူး။ဝိဥာဉ်းနန်ဆောင်က ဂိုဏ်း ၇ ဂိုဏ်းရွေးချယ်မယ်ပြောလိုက်ပေမယ့် သူတို့ မိုးကြိုးနဂါးဂိုဏ်းနဲ့ ဘုံ၇ ဆင့်ဂိုဏ်းကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးလိုက်တာက ဒီတု့လု့ကုန်းမြေမှာရှိတဲ့ ဝိဥာဉ်းမာစတားတွေအတွက် ရှော့စ်ဖြစ်စေတယ်။ငါတို့ဂိုဏ်းကိုလဲ ဝိဥာဉ်းနန်ဆောင်က လမ်းကမ်းစာဆောင်ရောက်လာတယ်။ ဟူဝူက ” ချီးပေ ဝိဥာဉ်းနန်ဆောင်တွေ ကျွန်မတို့ဂိုဏ်းကို သူ့လက်အောက်မှာ ခစားစေတယ်။ ဒါက ကျွန်မတို့ ဂိုဏ်းကို နှိမ်တာနဲ့အတူတူပဲ။”
ထိုနောက် ထန်စန်းက အကိုဖန်တို့ ဒြပ်စင် ၄ပါးဂိုဏ်းမှာ ဆရာနဲ့ ဂိုဏ်းသားတွေ စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ? ဖန်ရှောင်ထင် ပြုံးပြပြီး ” 600 လောက်ရှိတယ်” ဒါကြောင့် ငါတို့ဒီကျောင်းမှာ အသက်ရှင်ဖို့အတွက်နေရာနည်းနည်းယူပြီး ဝိဥာဉ်းနန်ဆောင်နဲ့စစ်ပွဲဖစ်တဲ့အခါကြရင် ထောက်ပံ့ပေးမလို့ပဲ။ ဒီမှာ အလခ မနေပါဘူး ကုန်ကျစရိတ်တွေ ပေးမယ် တစ်ယာက်နဲ့တစ်ယောက် ရန်မဖြစ်ကြဘဲ အချင်းချင်းကူညီကြမယ်။ နင်ရုန်ရုန်ခေါင်ညှိတ်ပြပြီး ” တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အချင်းချင်းကူညီပေးကြတာက ကာင်းပါတယ်၊ ဝိဥာဉ်းနန်ဆောင်က ကျွန်မတို့အားလုံးရဲ့ရန်သူတွပဲ။ နင်ရုန်ရုန် စကားအများကြီး မပြောမိစေရန် ဖက်တီးက နင်ရုန်ရုန်လက်ကို ဆွဲလိုက်တယ်။အဲနောက် ဖန်ရှောင်ထင်က ” ကောင်းပြီး ၊ ငါတို့ မင်းတို့ကို ဒုက္ခပေးမိပြီး”။ထန်စန်းက ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပူပေါင်းတာက မဆိုးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အနာဂတ်မှာ ပြဿနာဖြစ်လာရင် အကိုဖန်ဂိုဏ်းက ကျွန်တော်တို့ ရှီလာခေ့ကျောင်းထက် လူအင်အားပိုများတယ်။ နောက်ပြီး ဘုရင်ရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့သူ နင်ဖန်ကျိကလဲ အကိုဖန်တို့ဂိုဏ်းကို ဒီကျောင်းနဲ့ ပူပါင်းခိုင်းလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။ ” နင်” ဟူဝူ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ခုံကို ရိုက်လိုက်ချိန်မှာ ဖန်ရှောင်ထင်က တားလိုက်တယ်။ကောင်းပြီး ငါတို့ပူးပေါင်းခွင့်မရှိမှာတော့ အနာဂတ်မှာ ငါတို့ အဆင့်တန်းအတူတူ ထိုင်ရမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ထန်စန်းမတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး ဖန်ရှောင်ထင်တို့ ပြန်ထွက်သွားတာကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ရုန်ရုန်က “အကိုစန်း ဒီလို ငြင်းပယ်လိုက်တာမကောင်းဘူးထင်တယ်။ အာစကာ ရုန်ရုန်ခေါင်ကို ပွတ်လိုက်ပြီး “ရုန်လေး သူတို့က ငါတို့မလာခင်မှာ ကျောင်းသားတွေကို နိုင်ကျင့်နေတာ သိသာတယ်။ ထန်စန်းနဲ့တိုက်တာ သူတို့ရှုံးသွားတဲ့အခါကြမှ သူတို့စကားက ပြောင်းသွားတာ။” အဲနောက်ဖက်တီးက ” ကျွန်တော်တို့ ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ? ဆရာတို့ ပြန်လာတာကို စောင့်ရမှာလား?။ ထန်စန်းက မပူပါနဲ့ သူတို့ ပထမတစ်ခါ မအောင်မြင်ရင် ဒုတိယတစ်ခါ လာကြအုံးမှာပဲ အဲအခါကြမှ ဆရာတွေနေဲ့ ပေးတွေ့လိုက်မယ်……
အပိုင်း ၁၈၃ သို့မျှော်